Ahoana ny fomba fanaovana sampling mandritra ny fisafoana?
Ny GIS dia nanoro hevitra ny hampiasa ANSI Z1.4 2008 / ANSI / ASQC Z1.4 / BS6001 / DIN 40080 / ISO 2859 / NFX 06-022 (fenitra fanamarinana fanaraha-maso mitovy naseho tao amin'ny ANSI sy AQL) ho an'ny fanodinana. Ity fenitra ity sy ny fitovizany dia namboarina araka ny teoria statistika ary voatonona miaraka amin'ny AQL (jereo ny fizarana manaraka). Ny drafitra santionany amin'ireo fenitra ireo dia manondro ny isan'ny vokatra avy amin'ny lot na batch izay tokony hodinihina (habe)
Amin'ny ankapobeny, ny ambaratonga fanaraha-maso Ⅱshall dia ampiasaina, raha tsy izany dia boka manokana izay mamaritra ny fifandraisan'ny haben'ny santionany sy ny haben'ny lot na batch. Mifototra amin'ny haben'ny lot na batch ary ny taratasim-pahefana fanaraha-maso dia nomena azy ireo izay miresaka momba ny habetsaky ny santionany ilaina arakaraka ny drafitra ampiasaina. Drafitra tokana tsotsotra tokana sy avo lenta no be mpampiasa. Raha toa ka tsy manana ny fangatahana santionany dia hanampy anao amin'ny GIS amin'ny famaritana izay drafitra mahomby indrindra amin'ny filanao manokana.
Ny santionany dia voamarina manohitra ny drafi-maso fanaraha-maso momba ny endrika ivelany, ny fiasa azo ampiharina, ny fivadihana am-bava, ny asa, sns. Raha tsy manana drafitra fanaraha-maso ianao, dia afaka manampy anao ny GIS.
Ireo lesoka hita hita dia sokajiana ho mitsikera, lehibe na kely raha miankina amin'ny drafi-maso fanaraha-maso. Ny fetra kalitao azo ekena (AQL) dia voafaritry ny tompon'andraikitra tompon'andraikitra miaraka amin'ireo karazana lesoka. Ny andiam-pahalalana AQL mahazatra dia voalaza ao amin'ny fizarana hoe "What is AQL". Ny fahazoana ny ampahany na ny batch dia voafaritry ny fitsipiky ny fanekena / fandavana mifanaraka amin'ny drafitra santionany.
Na izany aza, tokony ho ao an-tsaina fa ity fitsipika ity dia natao hampiasaina amin'ny andian-dahatsoratra mitohy, rehefa ampiasaina tsy misy fitsipi-pifehezana, ny toetran'ny fampandehanana ny drafitra santionany dia tsy maintsy dinihina tsirairay avy.
Inona ny AQL?
AQL, na fetra kalitao azo ekena, ny haavon'ny kalitao izay salan'isa farany tsy azo leferina rehefa misy andian-dahatsoratra mitohy amin'ny fahazoana ny fanekena. Ny AQL dia faritry ny tetika santionany. Antenaina fa ny biraon'ny kalitaon'ny vokatra dia ho ambany noho ny AQL. Matetika AQL telo no nofaritana manokana momba ny fatiantoka lehibe sy lehibe ary kely. Toy izao ny andiany mahazatra an'ny AQL:
Ny kely kokoa ny isa, ny kely kilema dia ho voaray ao amin'ny santionany amin'ny vokatra. Rehefa mifidy AQLs, zava-dehibe ny hahatakaran'ny iray ny fifandanjana eo amin'ny fametrahana azy ireo ambany loatra, ary ny fandavana ny fandefasana maro, ary ny hametrahana azy ireo ho avo loatra ary ny famoahana ny vokatra tsy ekena.
Fanamarihana: AQL taloha dia ny fanafohezana ny haavon'ny kalitao ekena ary novaina ho fetran'ny kalitao ekena taty aoriana.
Fahadisoana dia fialana toetra mampiavaka iray amin'ny ambaratonga na toerany izay mitranga amin'ny hamafin'ny ampy hampisy vokatra na serivisy mifandray tsy hanome fahafaham-po ny fepetra takiana ara-dalàna, na tsy ampoizina mialoha. Azo sokajina ho:
a. miteraka toe-javatra mampidi-doza na tsy azo antoka ho an'ny olona mampiasa, mihazona na miankina amin'ny vokatra;
b. hisorohana ny fampandehanana ny asan'ny taktika singa marobe farany.
Lehibe - Fahadisoana lehibe iray, ankoatry ny kritika, dia mety hiteraka tsy fahombiazana, na hampihena ny ara-nofo ny fampiasana ny vondron'ny vokatra noho ny tanjona kendrena azy.
Amin'ny fizahana fizahana, fanaraha-maso amin'ny , Famakafakana trano, Fanombohana voalohany, Fandraisana ny fanaraha-maso, Fanaraha-maso feno amin'ny Internet,